Barcelona oo heshiisyo cusub ka saxiixanaysa labo ka mid ah xiddigaheeda
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay heshiisyo cusub ka saxiixanayso labadeeda ciyaaryahan ee ugu muhiimsan, Lionel Messi iyo Marc-Andre ter Stegen.
Weeraryahankan iyo Goolhayahan ayaa labaduba ka mid ah xiddigaha furaha u ah garoonka Camp Nou, iyadoo Messi uu si rasmi ah gacanta ugu haysto heshiis ku eg illaa iyo 2021-ka oo uu kula joogo kooxda reer Catalan, halka Ter Stegen uu heysto heshiis sanad dheeri ah.
Inkastoo ay jiraan halis yar oo ka mid ah in labadaan xiddig ay ka tagayaan kooxda mustaqbalka, haddana wararka laga helayo gudaha Spain ayaa sheegaya in Barcelona ay diyaar u tahay inay xoojiso booskeeda oo ay heshiisyo cusub ka saxiixato xiddigahan.
Kooxda ka dhisan Gobolka Catalan ayaa la sheegayaa inay diyaar u yihiin inay wadahadallo heshiis kordhin ah la galaan labada ciyaaryahan bilaha soo socda.
Go’aankan ayaa imaanaya xilli kooxda haysata horyaalka La Liga ay sidoo kale isku dayayso inay u hoggaansanto qawaaniinta xiriirka kubadda cagta Spain ee (FFP), taasoo ay u badan tahay inay u horseedi doonto inay iibiyaan tiro ka mid ah xiddigaheeda suuqa kala iibsiga ee soo socda.